Ligerpool oo xaqiijisay mudada uu garoomada ka maqnaan doono kabtankooda Jordan Handerson.
Home Horyaalka Ingiriiska Ligerpool oo xaqiijisay mudada uu garoomada ka maqnaan doono kabtankooda Jordan Handerson.
Liverpool ayaa ku dhawaaqday in Jordan Henderson ku sameysay qalliin kadib dhaawac gumaarka ah oo soo gaaray kulankii Everton xidigaan ayaa loo adeegsanayey Ka ciyaarista daafaca dhexe sababtoo ah waxaa kooxda ka maqnaa daafacyada kooxda xaalad dhawaac daqiiqadii 30aad guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay Merseyside derby kulankii ka dhacay Anfield Sabtidii hore.
Henderson wuxuu kasoo muuqday 21 ka mid ah Reds ’25 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, hadafkiisa kaliya ayaa yimid kulankii 7-0 ee Crystal Palace bishii Diseembar Waxa uu sidoo kale u saftay lix kulan Champions League, iyo kii ugu dambeeyay ee ay 2-0 kaga badiyeen RB Leipzig wareega 16ka.
Jadwal loogu talagalay ku soo laabashadiisa lama shaacin, in kasta oo kooxdu ay xaqiijisay in xidiga xulka England uu maqnaan doono ugu yaraan ka dib nasashada caalamiga ah ee Maarso.
“Kadib qiimeyn dheeri ah oo ay sameeyeen kooxda caafimaadka Henderson wuxuu ku guuleystey in la sameeyo hanaan sixitaan oo lagu sameeyo dhaawaca soo-saaraha,” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay kooxda.
Ma jiro waqti cayiman oo la saarayo soo laabashadiisa; si kastaba ha noqotee, 30 jirka ayaa meesha laga saarayaa bilowga ilaa iyo ka dib fasaxa caalamiga ah ee Maarso.
Soo kabsashada Henderson waxaa si dhow ula socon doona waaxda caafimaadka ee kooxda iyo horumarkiisa inta lagu gudajiro shaqadiisa dib u soo celinta ayaa go’aamin doonta goorta uu awoodo inuu dib u bilaabo tababarka buuxa.
Maqnaanshaha kabtankiisa ayaa dhabar jab ku ah macalinka Liverpool Jurgen Klopp, gaar ahaan tixgelinta 30 jirka ayaa inta badan buuxiyay daafaca dhexe xilli ciyaareedkan sababtoo ah maqnaanshaha mudada dheer ee Virgil van Dijk iyo Joe Gomez.
Henderson ayaa seegi doona safarka axada ee Sheffield United, iyo sidoo kale kulamada horyaalka ee ay la ciyaarayaan Chelsea, Fulham iyo Wolves bisha March.
Waxaa sidoo kale laga saaray lugta labaad ee Champions League kulanka RB Leipzig, halka macalinka England Gareth Southgate uu sameyn doono isbedel hadii uusan qadka dhexe diyaar u eheen isreebreebka Koobka Adduunka ee ay la ciyaari doonaan San Marino, Albania iyo Poland.
Previous articleMiralem Pjanic oo boos la’aan ka heysato kooxda barcelona.
Next articlePSG oo xaqiijineysa in wadahadalada qandaraaska Neymar ay ‘ku socdaan wadada saxda ah’